University of Tsukuba - Kudzidza muJapan. Education Kunze Kwenyika Magazine
guta : Tsukuba
inotangwa : 1973
Musakanganwa kuti discuss University of Tsukuba
The University of Tsukuba ndehwokuti kumisa vakasununguka mukutsinhana uye pedyo ukama sayenzi zvose zvinokosha uye kushandiswa ne dzidzo uye nemasangano kutsvakurudza uye zvedzidzo nemunharaunda muJapan uye mhiri kwemakungwa. Nepo ukama izvi, isu kuda dzidzo uye kutsvakurudza kuva varume nevakadzi vane rokusika uchenjeri uye akapfuma dzevanhu unhu.
The University of Tsukuba anoedza kubatsira mberi sayenzi uye tsika nemagariro. mbove, mumayunivhesiti Japanese nomuitiro kuramba cloistered yavo yakamanikana, dzoruzivo, kusika polarization, kurega kunotanga mune zvedzidzo uye kutsvakurudza uye kuparadzaniswa munharaunda dzavo.
The University of Tsukuba asarudza kushanda sechinhu yunivhesiti rakazaruka vose mukati uye kunze Japan. Uchienda rwuno, yunivhesiti akaita chinangwa chacho kuva sangano nani suiting mashandiro uye kutarisira mutsva yokuti dzidzo uye kutsvakurudza chaizvo dzakawanda mune hunhu, nemufumi kusiyana uye sanduko uye kudzora sensitively chete kuchinja kuitika munezvimwe muvanhu.
To kuanzwisisa, rave hunopiwa wayo mudonzvo uye okutarisira masimba masimba zvakafanira kuti tiite izvi.
The University of Tsukuba ndehwokuti kuva yunivhesiti rakavhurwa zvose zvinhu uye tiri frontrunner ari kuchinja yunivhesiti muJapan. musimboti wedu inokosha ndiko kuti pave kuchinja dzidzo uye tsvakurudzo mamiriro uyewo kuyunivhesiti anyatsoita zvinodiwa runotevera. Isu kuvimbisa kuti yunivhesiti nzwisisika, akaramba misangano nematambudziko matsva uye kukura munzvimbo itsva. Chikuru basa kuyunivhesiti ndiko mhoteredzo kuti unobvumira vatungamiri ramangwana kuziva zvavanokwanisa zvakazara. The University of Tsukuba anopa vadzidzi mukana kuva kwavo munhu akazvimiririra uye unyanzvi kuburikidza dzidzo kuti kunotsigirwa zvamakaparadza-kumucheto tsvakurudzo. Uchienda rwuno, isu akaisa zvinotevera zvinangwa.
1. Tinovavarira zvinoshingaira chokuwedzera interdisciplinary uye integrative nzira nokutsvakurudza dzidzo, mamwe swa unyanzvi uye kubereka anokudzwa tsvakurudzo.
2. Tinovavarira mhoteredzo kuti unobvumira vatungamiri ramangwana kuziva zvavanokwanisa zvakakwana uye anovapa mukana kuva kwavo munhu akazvimiririra uye unyanzvi kuburikidza dzidzo kuti kunotsigirwa zvamakaparadza-kumucheto tsvakurudzo.
3. Sezvo chinoumba Tsukuba Science City yayo wevasungwa kwesayenzi Kudya, tinovavarira kusimudzira kubatsirana pakati indasitiri, academia uye hurumende, uye kushingaira kubatsira vanhu apo kuramba kusimbisa dzidzo uye kutsvakurudza kwedu kukwanisa.
4. Promotion dzinokosha uye vakashandisa researches vane nesayenzi uye evanhu netsika, uye researches kusakisa nhaka sayenzi uye tsika kurudzi runouya
5. yunivhesiti yedu ine rinobatanidza vane nyika uye nzvimbo munyika yose uye tinovavarira kuva yunivhesiti pamwe yakakwirira dzakawanda mukurumbira uye simba kuburikidza kushingaira kusimudzira dzidzo munyika-kirasi nokutsvakurudza mabasa uye pakubatsirana kudyidzana.
6. Isu tanga kuchinja yunivhesiti kuburikidza pakubatsirana basa pakati mudonzvo uye fakaroti nhengo uye kukoshesa avo munhu akazvimiririra neunyanzvi.
In October 2002, the University of Tsukuba merged with the University of Library and Information Science. The School of Library and Information Science and the Graduate School of Library and Information – Media Studies were established.
Unoda discuss University of Tsukuba ? chero mubvunzo, Mashoko kana wongororo
Photos: University of Tsukuba pamutemo Facebook
Waseda University Chiyoda-ku